Home AKOTKỌ AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKW FOKWỌ AKW FOKWỌ Ndị egwuregwu bọọlụ Portuguese Florentino Luis Childhood Story Plus Ihe Mere Ezigbo Ndụ Ihe Nketa
Ihe omuma anyi nke Florentino Luis bu ihe omuma banyere akuko nwata ya, Nko mbido ya, ezi na ulo, ndi nne na nna, nwunye ya, otu esi ebi ndu, ugbo ala, nke bara uru na nke onwe.
N'ikwu ya n'ụzọ dị mfe, nke a bụ akụkọ banyere ndụ ndụ onye egwu bọọlụ, site na mgbe ọ bụ nwata, rue mgbe ọ ghọrọ onye ama ama. Iji mee ka agụụ ịgụ akụkọ ọdịnala gị dịkwuo mma, lelee oge ọ bụ nwata ka ọ gaa na ebe ndị okenye - nchịkọta zuru oke nke Florentino Luis 'Bio.
Florentino Luís Life Story- Lee, akụkọ a na-apụghị ịgụta ọnụ nke Biography.
Ee, mụ na gị ma na ndị egwuregwu bọọlụ Pọtugal nwere nke a N'Golo Kante-Ọ nwere ike dị n'ụdị egwuregwu ya. Nke a dị, na-enweghị obi abụọ, na-ahụ ya n'ọkwá n'ọdịnihu dị ka otu n'ime Top Iri Agbachitere Midiners na .wa.
N'agbanyeghị nkwanye ugwu, anyị amatala naanị mmadụ ole na ole bọọlụ tụlere ịgụ Florentino Luís Biography nke anyị kwadebere, ọ na-atọkwa ụtọ. Ugbu a n’enweghị nsogbu ọzọ, ka anyị bido.
Akụkọ akụkọ nwata Florentino Luis:
Maka ndị na-ebido ebido, aha ya bụ 'Tino', aha ya nile bụ 'Florentino Ibrain Morris Luís'. A mụrụ Portuguese Footballer na 19th ụbọchị nke August 1999 na mama ya Laura Luis, na nna, Morris Luis, n'obodo Lisbon, Portugal.
Dị ka e kwuru n'okpuru, a mụrụ ezinụlọ Breadwinner dị ka nwa nwoke na nwa nke njikọ nke mama ya mara mma na nna dị nkọ. Ndị nne na nna Florentino Luis gosipụtara na ha nwere ya na 20.
Joao Felix Nwatakịrị Akụkọ nke Gbasara Eziokwu Ndị Na-adịghị Agbanwe
N'ihi ọdịiche dị n'etiti Tino na ụmụnne ya, otu ihe a na-ahụ anya. Ọ bụ eziokwu na ndị ịgba bọọlụ ga-abụrịrị afọ iri mbụ nke mmalite afọ ya, ọkachasị na nna ya na mama ya. Nwa nwanne ya nwoke (nke e sere n'elu) nwere ike ịbụ na amụrụ ya n'etiti afọ 2000 ruo 2010.
Okirikiri ezinụlọ Florentino Luis:
Nke mbu, onweghi ihe ndekọ na-egosi na Tino, a zụlitere n’ezigbo ezinụlọ. O toro na Massamá, onye bụbu parish obodo n'obodo Sintra, Lisbon District nke Portugal. Dabere na ọnụ ọgụgụ, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ mmadụ 30,000 bi na Massamá, ndị nne na nna Florentino Luis sokwa na ndị mejupụtara ọtụtụ ụlọ ezumike nka.
Ndị nne na nna Florentino Luís, dị ka imirikiti ndị bi na Massamá, rụrụ ọrụ n'ezinaụlọ klaasị.
Na mbido, nna ahụ dị oke njọ nwere usoro iji hazie ụlọ ya. Ma Morris na nwunye ya Laura dị ka nkezi Portuguese ọ na-esighi ike iji ego na-emekọ ihe. Mgbe ha mụsịrị Florentino, ha abụọ hụrụ n'anya na-eme atụmatụ ezinụlọ maka ọdịmma onwe ha na iji belata ibu dị n’ịkwado ndị ikwu na Portugal na Africa.
Florentino Luis Mmalite:
Na-ekpe ikpe site n'ile ha anya, ọ dị ka nne na nna nna ha anaghị esite na Portugal. Dabere na Peeji nke Florentino Luis, onye na-agba ụkwụ si na ezinụlọ ya si Africa, kpọmkwem Angola.
You maara?… Ibe Portuguese mba na-amasị nke Helda Costa na William Carvalho nwekwara agbụrụ ha si Angola. N'ikpeazụ, inwe aha 'Luis' apụtaghị, n'ụzọ ọ bụla, pụtara Florentino metụtara Luis Suarez.
Florentino Luis Biography- Mmalite nke Ọrụ Nlekọta football:
Echiche banyere ịbụ ọkachamara bịara n’afọ 2006, Afọ Iko Ọchịchị beautifulwa ahụ mara mma !. N'oge ahụ, ọ theụ nke ọtụtụ ndị ụlọ Portuguese na ndị Angola na-enwe ọ eụ mgbe mba abụọ ahụ nwetara ọkwa nke Group D nke asọmpi World Cup 2006. Maka Florentino Luis papa, ọ bụ nnabata ohere maka ezinụlọ ya karịa ịlele asọmpi ahụ.
2006 World Cup bụ onye meghere anya maka nna nwere ikike na-ahụ ohere maka ezinụlọ ya.
… Omume nke Portugal na nghọta nke obodo Portuguese (Angola) mere ka ọtụtụ ezinụlọ bido hụ ọdịnihu nke ụmụ ha site na bọọlụ.
Ikpe ahụ, adịghị iche na ihe nne na nna Florentino Luis, ọkachasị nna ya tụrụ anya ya. Nanị otu afọ mgbe World Cup gasịrị, obere Tino (afọ 7) amalitelarị ịtọ ntọala maka ọrụ ya.
Akụkọ banyere Futsal Career na Mkpa Maka Nlekọta Ezinaụlọ:
Naanị mgbe 2006 World Cup, ụlọ akwụkwọ agụmakwụkwọ ntorobịa na Portugal malitere ịmalite aka ekpe, aka nri na etiti. Ndị nne na nna Florentino Luis nakweere usoro nke ịme enweghị usoro iji malite ọrụ nwa ha nwoke. Ọ bụ ezie na ọtụtụ ụmụaka bara n'egwuregwu bọọlụ n'èzí, nne na nna ahụ kwadoro nwa ha nwoke ịmalite Futsal- ụdị egwuregwu bọọlụ na-egwuri egwu n'ụlọ ikpe siri ike, yana n'ime ụlọ.
Onye na-agba bọọlụ n’ọdịnihu bidoro ịkpọ otu Futsal ya na otu akpọrọ Tercena Futsal. Ihe akaebe n'okpuru na-ekpughe na Massama (ebe ezinụlọ Florentino Luis bi) bụ naanị nkeji ise na-aga Tercena ebe Tino debanyere aha maka Futsal. Ọbịbịa ahụ mere ka nna na nne mama Florentino payaa ntị na ọganihu ya.
Site na nlekọta nne na nna, onye na-eto eto Portuguese n'oge na-adịghị anya, malitere ime ka ụwa Futsal okike, na-adọrọ adọrọ. Eziokwu bụ, ịgba bọọlụ n'ime ụlọ amaara Florentino Luis ngagharị ọsọ ọsọ, ịgafe oge dị mkpirikpi, njikwa bọl, iwe, ike na ume anyị maara ya inwe taa.
Florentino Luis Biography- tozọ Maka Akụkọ Amaala:
N'afọ 2009 (afọ abụọ mgbe ọ malitesịrị ịgba Futsal), nwata nwoke ahụ dị njikere igwu egwu n’èzí. Iji nweta mmalite ọzọ dị mma, nne na nna Florentino Luis ka nwere atụmatụ ha nke mbụ - ya bụ, ịnọ nso ụlọ klọb ruo ụlọ ezinụlọ.
N'ịbụ onye na-akụda n'èzí, Tino debanyere aha ya na Real SC (Real Massamá), klọb dị na Queluz, obodo dị ihe dị ka 2.7km (nkeji 6) site na ezinụlọ Florentino Luis na Massama.
Switgbanwe Ebe Egwuregwu Maka Footballzọ Footballhụ Maka
Mgbe ọ nọ na Real Sport Clube, iji mbụ ahụmịhe Futsal bidoro kpughee uru kachasị ya. Obere Florentino Luis, dị ka a hụrụ na vidiyo dị n'okpuru, tolitere n'ụdị nwatakịrị ịgba bọl, onye na-eji ihe mgbaru ọsọ egwu ndị ọgbọ ya na ndị iro ya. Echefula, nwa okoro ahụ nwere oge mgbaru ọsọ mara mma.
Nnukwu klọb na-abịa n'ike:
Comingghọ onye kacha mma na Real Sport Clube agụmakwụkwọ pụtara otu ihe. Ọ bụ ihe ọzọ karịa eziokwu ahụ bụ na onye nnukwu Portuguese ga-abịa wakporo ụlọ akwụkwọ agụmakwụkwọ ịchọ ya.
Eziokwu bụ, Florentino Luis na-eto eto nọrọ naanị Real Sport Clube otu afọ tupu ụlọ ikike Portuguese nke Portuguese Ben Benafere abịa na-arịọ papa ya na mama ya maka mbinye aka nke ha ji obi ha niile kwado.
Florentino Luis Biography- Nrukota Nke Ama Ama:
Florentino mere ngwa ngwa iwebata na ụlọ akwụkwọ agụmakwụkwọ SL Benfica, ihe ngosi nke hụrụ ya ka ọ gụsịrị akwụkwọ na agba na afọ 2018. Mgbe ọ gụsịrị akwụkwọ, onye Midfield zuru oke malitere ịchọ ịlụ ọgụ n'ụzọ ya na ndị otu egwuregwu. N'oge na-ad igh i anya, o mezuru nke ah ur u n'ime af o.
N'ihe banyere ndị soro ọrụ Florentino Luis, ha niile kwenyere na a ga-amata onye na-agba bọọlụ ụkwụ maka nkwenkwe ụgha. Dika ndi nne na nna di na nwunye di obere, o bidoro inyere Benfica aka ichota nnukwu oriri dika Primeira Liga, Supertaça wdg.
Mgbe ọ dị afọ iri na itoolu, ndị na-asụ Portuguese ejirila na-anakọta Big Trophies.
N'oge dị afọ 20, Florentino Luis adịworị ka onye nwere oge ọfụma, onye ọdịnihu ya na-enwu. Dị ka Gedson Fernandes Nwa nwoke a etoola ụdị nsogbu ọ bụla. Na Benfica, ihe ịga nke ọma ya abịala wulite na oke. Dị ka ụzọ isi gosipụta obi ike Tino na-eche nche, anyị achịkọtala foto ndị a maka gị.
Dị ka n'oge edere Florentino Luis Biography, onye na-agbachitere agbachitere ugbu a bụ ikike kachasị ọhụrụ nke usoro mmepụta SL Benfica. N'etiti ndị klọb bọọlụ Europe, ndị isi ya, nọ na-akpọ Tino dị ka nke kacha mma n'etiti Okwu Sport Wonderkids nke 2020 maka ndị na-agbachitere etiti. Ndị ọzọ, dị ka ha na-ekwu, bụ akụkọ ihe mere eme ugbu a.
Florentino Luis Akụkọ ịhụnanya:
N'ihi nnukwu ihe ndị ọkachamara na-achọsi ike, ọtụtụ ndị na-eto eto anaghị egosipụta ụmụ agbọghọ ha. Otú ọ dị, nke a abụghị okwu ndị Portuguese, bụ ndị akụkọ ịhụnanya ha zuru oke na-akpali akpali.
Nke mbụ, ka anyị webata onye bụbu enyi nwanyị Florentino Luis tupu ọ ghọọ nwunye. Ọ bụghị onye ọzọ karịa Bruna Guerreiro, nwanyị nke na-ahụ maka ime Tino nwoke kasị nwee obi ụtọ n'ụwa.
Nwa nwanyi Florentino Luis gbanwere nwunye- Bruna Guerreiro.
Dabere na oge usoro mgbasa ozi ha, ha abụọ bụ ezigbo ndị enyi mechara bụrụ ndị hụrụ n'anya. Ha malitere mkpakọrịta nwoke na nwanyị na njedebe nke 2016. Mgbe emechara ka ndị mụrụ ya nabata Bruna Guerreiro, onye egwuregwu bọọlụ Portuguese, n'ọnwa Febụwarị 2020 kpebiri ịgba ajụjụ kachasị. Tino kwupụtara n'ụzọ dị egwu.
Nwa ahụ dị afọ iri abụọ (ji afọ iri abụọ) ji obi ike wee bipụta ajụjụ kachasị mkpa nke ọtụtụ ndị na - agba ụkwụ nke ọgbọ ya na-atụ egwu ịme.
N'ime afọ niile anyị na-ede akụkọ banyere ndị na-agba ọsọ ụkwụ, anyị ahụbeghị ma ọ bụ nụ nwata na-eto eto (afọ 20) onye kpebiri ime ka njikọ ya dị ka ihe nkiri. Lelee vidiyo zuru oke nke Florentino Luis njikọ aka na enyi nwanyị ya, Bruna- oge ahụ, o kwuru na gbanwere ndụ ya.
Florentino Luis Ndụ Ezinụlọ:
Ihe nzuzo maka ọrụ na-aga nke ọma esiteghị na ịrụsi ọrụ ike naanị, mana inwe ezigbo ezinụlọ. Ọ bụ ezinụlọ nke na-anọnyere ibe ha mgbe niile ma dị n'otu n'ịhụnanya. N'akụkọ ndụ a, anyị ga-agwa gị gbasara ndị nne na nna Florentino Luis na ndị ọzọ so ya na-akpachi anya.
Zute ezinụlọ dị n'otu nke Florentino Luis. Ọ bụ na ha amachaghị mma?
Banyere Florentino Luis Nna:
Dabere na Nkọwa nke ebumnuche nke prodigy midfield, Tino papa bụ onye mbụ ndị na-egwu egwuregwu football ga-ebu ụzọ wee chọọ ọrụ nwa ya. Morris Luis gosipụtara na ọ bụ ụdị nna maara nke ọma mkpa mmekọrịta ezinụlọ dị.
Zute Florentino Luis papa m. Nnukwu nna na-elekọta mmadụ bụ ụdị ọtụtụ ndị ga-arọ nrọ inwe.
Banyere Florentino Luis mama:
Na mbụ ileba anya na Laura Luis, ị ga-enwe ekele maka otú ọ dị obere ma maa mma. N'okpuru ebe a, nnukwu nne na-eme ncheta ọmụmụ ya ụbọchị Disemba 6 ọ bụla, ọ dị ka ọ dị na mbubreyo 40s.
Zute Florentino Luís 'Mama. Nne nke na-egbukepụ egbukepụ nke ụmụ atọ nwere Tino mgbe ọ nọ na mmalite 20.
Florentino Luis na-ele nne ya anya na enyi nwanyị ya (Bruna) dị ka ndị kachasị mkpa na ndụ ya. Na-ele anya nke ọma na foto dị n'okpuru na n'elu, ị ga-aghọta eziokwu ahụ Tono weere mgbe imi na anya mama ya.
Gini mere na Florentino Luis mum (Laura Luis) adighi adi nma? A sị ka e kwuwe, ọ rụọla ezigbo ọrụ n'ịzụ ụmụ amaala mara mma.
Ndị enyi na ụfọdụ ndị ezinụlọ na-akpọ Mrs Luis 'Onye Ozizi'. N'adịghị ka ọtụtụ ndị nne na-agba ụkwụ ụkwụ, Laura nọ n'ọrụ na Instagram ebe ọ na-aza aha 'Boxita Luis.'
Banyere Florentino Luis Nwanne:
Ndị na - agba ọsọ nwere naanị nwanne nwoke (ihe dị ka afọ iri nke obere ya) onye ọ kọwara dị ka Pesky- onye na - akpata nsogbu ma na - ewe iwe mgbe niile. Site na foto dị n'okpuru, ọ dị ka Bruninho bụ ihe nwatakịrị na-atọ ọchị, onye hụrụ ụlọ ọrụ nwanne ya nwoke n'anya. Anyị nwere olile anya na ọ ga - agbaso nzọụkwụ Florentino Luis ya.
Zute Florentino Luis Nwanna, Bruninho Luis. Nwa nke abụọ nke ezinụlọ yiri ka ndụ ya juputara.
Banyere Florentino Luis Sister:
Belnira bụ nwa nwanyị mara mma nke na-abụ nwa ikpeazụ ọkpara nke ezinụlọ Luis. N’ịbụ onye amụrụla n’ime ọnwa Juun, afọ 2017 pụtara na ọ dị afọ atọ dịka n’oge a na-etinye usoro a (Mee 2020). Foto dị n'okpuru ebe Belnira Luis nọ n'okpuru nna ya, mama ya na nwanne nnukwu nwanne ya.
Zute Nwanne nwanyị Florentino Luís, Belnira Luis. Nwa nke ụlọ ya ga-achọpụta n'oge na-adịghị anya na nwanne ya nwoke bụ onye na-agbachitere nchebe kachasị mma n'ụwa.
Banyere Florentino Luis nne na nna:
Nwa mmekpa ahụ na-agbachitere, oge ụfọdụ na Mee 2019, tụpụrụ nne ya ochie na ọnwụ ọnwụ. N'ikwu okwu site na foto ha n'okpuru, o doro anya na ọ bụ nne Granny kachasị amasị ya. Agbaghara ma echefughi ya, ka nkpuru obi ya zuo ike n’udo, Amen!
Zute otu nne na nna ochie Florentino Luís. Ọ abịaghị n’oge ma ka mkpụrụ obi ya zuru ike n’udo zuru oke. Amen!
Florentino Luis Ndụ Onwe Gị:
Iji mara ya nke ọma, anyị agafeela ịbanye ụfọdụ n'ime ihe omume ya. Nke mbụ, Florentino Luis so na ndị akpọrọ maka Nkwenkwe ụgha siri ike na nke egwuregwu. Tupu egwuregwu dị mkpa, onye na-agba bọọlụ na-akụzi omume nke ịnọdụ ala chere ihu na mbara igwe. Omume a, (foto dị n'okpuru) bụ nke o mere tupu nnukwu mmemme ikpeazụ.
N’agbụrụ ya, onye ahụ na-eto eto gosipụtara mmesapụ aka na nke obi ya. Ọ bụrụ na ahụghị ka ọ na-egwu bọl, Tino nwere ike ịnọnyere ndị enyi n'akụkụ ọdọ mmiri. N'ikpeazụ, ọ na-ahọrọ iwere Paul Pogba'Ọbịbịa maka ntutu ya na-ele anya.
Florentino Luis Eziokwu LifeStyle:
Aguta ya, mgbe ị na-eche maka ndị egwuregwu na-eri naanị ụlọ oriri na ọhụ posụ posh, na-anya ụgbọala pụrụ iche, nwere nnukwu ụlọ (nnukwu ụlọ) ma na-eyi uwe na-adịghị mma. Onye ọkpọ egwuregwu tozuru oke dị, dị ka a hụrụ n'okpuru ebe a, anaghị emefu ego n'onwe ya.
Florentino Luís Web- Ee, ejiji ejiji abụghị ihe ọ ga-ede n'ụlọ, mana na ihe ibi ndụ dị umeala n'obi pụtara maka ndị ịgba ọsọ.
Florentino Luis Eziokwu:
Na nke ikpeazu a anyị dere, anyị na-ewetara gị eziokwu ị na-amabughị na ọ dị banyere Florentino Luis. N'egbughị oge, ka anyị bido
Eziokwu # 1- Florentino Luis Salary Mmebi
ENBỌCH / / ARGBỌ
Kwa Afọ € 312,480 $ 339,145 £ 278,316
kwa ọnwa € 26,040 $ 28,262 £ 23,193
Kwa Izu € 6,000 $ 6,512 £ 5,344
Kwa .bọchị € 587 $ 930.3 £ 763.4
Kwa elekere € 35,7 $ 38.8 £ 31.8
Kwa Nkeji € 0.60 $ 0.65 £ 0.53
Sekọnd € 0.01 $ 0.01 £ 0.01
Ebe ọ bụ na ị malitere ilele Florentino Luis'Bio, nke a bụ ihe ọ kpatara.
Eziokwu # 2- aringtụle ụgwọ ọnwa a na ego nke Otu Citizen Nkezi:
… Maara… Nwa amaala Portuguese nke nwere akara mmụta mahadum na-akpata ihe ruru € 1547 kwa ọnwa. Onye a ga-arụ ọrụ maka afọ 1.4 nke dị ihe dị ka otu afọ na ọnwa ise iji kwụọ ụgwọ ụgwọ ọnwa nke Florentino Luis (ọnụọgụ May 2020).
Eziokwu # 3- Ihe kpatara Florentino Luis Nickname:
Ndị mgbasa ozi Portuguese na-akpọ ya dị ka 'O Polvo' (Ọkpụkpụ)Aha otutu a biara ekele n’ụkwụ ya, nke dị ogologo. Ọ bụkwa n'ihi na Florentino nwere ikike ịgbatị aka ya ogologo oge ọbụladị n'akụkụ akụkụ siri ike iji nwetaghachi ihe ọ bụla. Paul Pogba nwekwara aha otutu a.
Eziokwu # 4- Ihe ya FIFA Eziokwu kwuru:
Site na stats n'okpuru, ị ga-ekwenye na m Tino ji nwayọọ nwayọọ na-arụ ọrụ ya ka ọ bụrụ otu onye egwu bọọlụ kachasị nke ụwa.
Ihe ndekọ ọnụ ọgụgụ FIFA na-agbachitere agbachitere na-ekwu ọtụtụ ihe banyere ọdịnihu ya. Ikwesiri ilezi anya!
Eziokwu # 5- Nkwenye Okpukpe:
Ndị nne na nna Florentino Luis zụlitere ya dị ka ụlọ Ndị Kraịst. Otú ọ dị, n’ihi ihe ụfọdụ, e meghị ya baptism dị ka nwatakịrị. Ebumnuche ịmalite emume Ndị Kraịst bịara na mbido 2020 mgbe ọ tụchara aro maka enyi ya nwanyị, Bruna Guerreiro.
Okpukpe Florentino Luis- Baptizim ya na-akọwa okwukwe ya na Kristian.
N’elu elu, ndi otu egwuregwu mere ka onye isi ya banye n’ime mmiri (ihe a na-eme ya bụ iji mee ndị mmadụ baptizim). Dika okwuru, ime baptism bu nbido mmalite nke ndu ya.
Tebụl dị n'okpuru na-akụri profaịlụ Florentino Luis n'ime obere nke ozi nkenke nke na-achịkọta akụkọ ndụ ya.
Aha n'uju: Florentino Ibrain Morris Luís.
A mụrụ: 19 Ọgọst 1999 na Lisbon, Portugal.
Ndị nne na nna: Laura Luis (Mama) na Morris Luis (Nna).
Ezinụlọ Ezinụlọ: Angola.
Ụmụnne: Bruninho Luis (nwanne) na Belnira Luis (nwanne).
Nwunye: Bruna Guerreiro (Nwaada Nwanyi).
elu: 1.84 m (na mita) na 6 ft 0 na (n'ụkwụ na sentimita).
Education: Tercena (futsal).
aha otutu: 'O Polvo' (Ọkpụkpụ)
Ihe omume: Igwu.
Daalụ maka ịgụ akwụkwọ anyị zuru oke banyere Florentino Luis Childhood Akụkọ na Biography. Maka anyị, nwata ahụ chọrọ ka ihe gaziere ya, oge adịghịkwa, setịpụrụ ịgbaso nzọụkwụ nke kpakpando Benfica gara aga-amasị Ederson, Bernardo Silva, Andre Gomes, Joao Cancelo na Joao Felix.
Biko gwa anyị, na ngalaba nkọwa, ihe ị chere gbasara isiokwu anyị na Florentino Luis nke ọdịnihu ya dị oke mma. Dịka ọmụmaatụ, ọ dị ka ọ ga-aka karịa N'golo Kante?
Bọchị gbanwee: Eprel 17, 2021
Bọchị gbanwee: Eprel 16, 2021